SOMALITALK - OROMIA
Maxaabiis Xabsiyadda Oromiya Laga Sii Daayay
Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee faransiiska waxaa maanta (Sept 13) xabsiyadda dalka Itoobiya gaar ahaan dhulka ugu wayn ee dalkaa "Oramiya" laga sii daayay maxaasiib aad u fara badan kuwan oo u badnaa dadka Oramadda ah ee degga dhulkaa.
Maxaabiistan ayaa lgu qiyaasay 1407maxbuus, sida ay sheegayaan warbixinno laga daawaday Televisionka dalkaa Itoobiya ayaa ku waramay in ay arintani ka dambaysay sanadkii cusbaa ee carigaa oo loo dabaal degay arbacadii ina dhaaftay.
Guwaynda sidow ayaa ku waramay in uu ku talaabsaday arintan iyadoo ay eegayaan sidii ay maxaabiistu ukala asluub hagaagsanaayeen mudadii ay ku jireen halkaa, maxaabiistan oo ku qaatay kala badh intii loogu tala galay marka laga eego mudadii ay xabsiyaddaa ku jireen.
Arintan ayay dad badan hadaba ku tilmaamaan in madaxada goboladaa ay tahay mid ay ogolaasho kaga haystaan qaanuunka dalkaa siidaynta maxaabiista noocan oo kale ah, qawaaniintan ayaa markii ugu horaysay lagu arkay dalkaa Itoobiya sanadkii 1995kii.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in maxaabiistan ay ku jireen rag badan oo ka tirsanaa Jabhadda Xoraynta Oramiya, kuwan oo ay ciidamadda Tigreegu gacanta ku dhigeen mar ay dagaalo ku qadaan bariga Gobolkaa, maxaabiistan ayaa la siiyay duruus xaga siyaasad celinta ah kahor intii aan laga sii dayn xabsiga.Jabhadda Xoraynta Oramiya ayaa iyadu ah jabhad u dagaalamaysay ilaa iyo tobankii sanno ee ugu dambeeyay sidii ay xoriyadd ugu heli lahaayeen Oromiya.
Qoraalka oo ku qoran Af-carabi halkan ka akhri.